Home Wararka Gudaha Ninkii dusiyey Laptop-kii ku qarxay diyaaradii ka kacday Muqdisho oo geeriyooday
Madaxii hore ee amniga garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee Muqdisho Cabdiweli Maxamed Macow ayaa isbitaal ku geeriyooday lix sano kadib markii loo xiray kiis caalamka oo idil gaaray, sida ay ogaatay Warabahinta.
Cabdiweli ayaa waxaa lagu helay dambi ah inuu gacan ka gaystay dusinta bam lagu soo dhex-qariyey Laptop kaasi oo ku qarxay diyaaradda Daallo Airlines, balse aan gaysan waxyeelo aad u weyn.
Cabdiweli ayaa waxa uu qaadanayey xabsi daa’in lagu xukumay, hase yeeshee waxaa isbitaal la geeyey kadib markii uu aad ugu xanuunsaday xabsiga, sida ay ogaatay Warabahinta.
Weerarkii diyaaradda Daalllo Airlines oo dhacay labadii Febraayo 2016 ayaa aad u qabsatay warbaahinta caalamka, wuxuuna kashiftay mid ka mid ah xeeladaha ugu weyn ee loo adeegsan karo in lagu qarxiyo diyaardaaha.
Laptop-ka ayaa qarxay 20 daqiiqo kadib markii ay kacday diyaaradda Daallo oo ku socotay magaalada Jabuuti, waxaana ku dhintay hal qof oo la tuhunsan yahay inuu ahaa qofkii waday ee fuliyey qaraxa.
Diyaaradda ayaanay gaarin waxyeello badan waxayna awood u yeelatay inay dib ugu soo laabato garoonka Aadan Cadde.
Maxamed Ibraahim Yaasiin Colaad oo ahaa madaxda shirkadda Daallo xilligaas ayaa sheegay in qofka qaraxa fuliyey iyo rakaabka diyaaradda saarnaaba ay ku qornaayeen inay raacaan diyaaradda Turkish Airlines, balse cimilada oo xun darteed ay soo gaari weysay Muqdisho.
Sidaas darteed diyaaradda Daallo Airlines ayaa laga codsaday inay shacabka gayso Jabuuti, si ay diyaaradda Turkish Airlines halkaas uga qaado.
Kooxda Al-Shabaab ayaa muddo 11 maalmood kadib ah sheegatay mas’uuliyadda qaraxa, ayada oo sheegtay inay beegsaneysay diyaaradda Turkish Airlines, sababtuna ay tahay in Turkey ay xubin ka tahay gaashaanbuurta NATO ee reer galbeedka.
Wixii markaas ka dambeeyey Turkish-ka ayaa aad u adkeeyey baaritaanka dadka raacaya diyaaraddooda Muqdisho, ooh adda ay baaraan dad Turkish ah, ayaga oo aan aaminin Soomaalida.
Previous articleWaa kuma ra’iisul wasaaraha uu Xasan soo xulan doono?
Next articleCulimada Somaliland ayaa bayaan ka sooo saaray khilaafka Siyaasadeed ee ka taagan Somaliland.
DEG-DEG:-Madaxweyne Deni oo Maanta Kulan gaar ah la yeelanaya Xildhibaannada, xilli...